Eto ianao : Home>teknolojia
Rehefa mampiasa lalantsara matevina isika mba handatsahany vy vy, dia ny dobo filomanosana be dia be. Rehefa vita ny welding dia mijanona ho maivana ihany ny sisa tavela. Noho izany, azonao atao ny mampiasa "fahatarana" (function) mba hanitarana ny fotoana hisian'ny fahazavana mahazo ny fahazavana.
Mampiasà mpanangom-bokatra TIG, mametraha 5 arim-pototra maharitra ankehitriny, ary azonao atao ny mampahatsiaro ny ADF ho malemy sy tsy mahomby amin'ny alàlan'ny fananganana "fahatsiarovan-tena", ka hahatratra ny tanjon'ny fanovana fahazavana.
Rehefa manantona, raha manantena ny hanatsara ny fahombiazan'ny asa ianao dia afaka manao jiro haingana kokoa ny efijery fanovana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoana fanemorana. Noho izany, azonao atao ny manamarina ny làlan'ny lasantsy raha vantany vao azo atao ary miomana amin'ny fanantaterana manaraka.